izixhobo ezivulekileyo zolawulo lovavanyo
Eyona Qa Izixhobo ezivulekileyo zoLawulo lweMithombo yoVavanyo
Umthombo ovulekileyo kunye nezixhobo zoLawulo lwaSimahla. Apha sikhethe ezona zixhobo ziphambili zolawulo lomthombo ovulekileyo. Bakhululekile ukukhuphela kwaye basebenzise kwiiprojekthi zakho.
Izixhobo zoLawulo lovavanyo zibaluleke kakhulu kulo naliphi na iqela lokuvavanya. Amaqela ovavanyo asebenzisa ezi zixhobo ukunceda ukuthatha iimfuno, iimeko zovavanyo loyilo, iimeko zovavanyo lweemephu kwiimfuno, iingxelo zokwenza uvavanyo kunye nokunye okuninzi. Iinkampani zingasebenzisa isixhobo esinye kwezi, ezisusela kubiza kakhulu ukuvula umthombo. Ingcebiso yam iya kuba kukukhetha isixhobo esinokuhlangabezana uninzi lweemfuno zakho zangoku nezexesha elizayo.
Apha ngezantsi luluhlu lwezixhobo zolawulo lovavanyo olusimahla ngokupheleleyo kunye novulekileyo olunokuthi lube luncedo.
I-Klaros-Testmanagement inamacandelo okucwangcisa, ukwenza kunye nokuvavanya iimvavanyo kunye nokuxhasa ukugubungela iimfuno kunye neendlela zokuphucula i-agile njengeScrum okanye iKhanban.
Ujongano ukukhupha iinkqubo zokulandela umkhondo, izixhobo zovavanyo oluzenzekelayo kunye neeseva zokudityaniswa okuqhubekayo zivumela ukudityaniswa okungagungqiyo kwindawo yakho yophuhliso.
Ukunikwa kwengxelo ekwakhiweni kwezakhono kuxhasa ukwenziwa kweengxelo ezizodwa zovavanyo olubanzi lweziphumo zovavanyo.
Ukongezwa kwetyala lokuvavanywa kwesoftware yeBugzilla. Yenzelwe ukuba sisixhobo esiqhelekileyo sokulandela umkhondo iimeko zovavanyo, ukuvumela imibutho yokuvavanya ukudibanisa ingxelo ngegciwane kunye neemeko zabo zovavanyo. Nangona yenzelwe ukuvavanywa kwesoftware engqondweni, inokusetyenziselwa ukujonga uvavanyo kuyo yonke into ekwinkqubo yobunjineli.
I-qaManager liqonga elizimeleyo elisekwe kwiwebhu lokulawula iiProjekthi zeQA ngokufanelekileyo ngofakelo olulula kakhulu. I-qaManager ineProjekhthi yokulandela umkhondo, uLawulo lweZibonelelo, uLawulo lwe-TC, iThala leeNcwadi elikwi-Intanethi, izilumkiso nokunye. Inikwe amandla ngu-OpenXava.
Isicelo seRadi-testdir sisixhobo soLawulo lobunzima bokukhanya. I-Radi ixhasa amanqaku enkqubo yovavanyo njengokumisela isicwangciso sovavanyo, ukuhlaziya (ukwenza / ukuhlela) iziphumo zovavanyo kumfanekiso wovavanyo / ukwakha, ukuGcina, ukuLawulwa koMsebenzisi.
Isixhobo esisekwe kwiwebhu esiyilelwe ukulawula iimfuno, iimvavanyo, iziphumo zovavanyo, kunye neziphene kuwo wonke umjikelo wobomi besicelo. Isixhobo sibonelela ngendlela elungelelanisiweyo kuvavanyo lwesoftware kwaye sonyusa ukubonakala kwenkqubo yovavanyo ngokwenza indawo yokugcina eqhelekileyo yazo zonke iiasethi zovavanyo kubandakanya iimfuno, iimeko zovavanyo, izicwangciso zovavanyo, kunye neziphumo zovavanyo.
Uvavanyo lweWebhu yeWebhu (TCW) yinkqubo ye-TCM ekwi-Intanethi eyakhiwe nge-PHP kunye nesiphelo sasemva se-SQL. Inika iindlela ezifanelekileyo zokuvelisa, ukuququzelela, kunye nokwenza ingxelo yamatyala ovavanyo phakathi kweeprojekthi kunye nabavavanyi abaninzi kunye neenguqulelo. Inikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokujonga indawo yovavanyo lokumisela imeko ngokulula kunye nohambo lokuhamba. I-TCW ikwabonelela ngesiseko sokunika ingxelo kunye nolawulo lokufikelela kwiprojekthi nganye.
Ulawulo olusekwe kwiwebhu kunye nenkqubo yokuphunyezwa kovavanyo evumela amaqela eQA ukuba enze, alawule, enze kwaye alandelele iimeko zovavanyo kwaye aziququzelele kwizicwangciso zovavanyo.
Imizobo yasimahla ye-100% kunye neemodyuli yesicelo sokulawulwa kovavanyo olusebenzisa umjikelo opheleleyo wobomi be-QA / iiprojekthi zovavanyo ukusuka esiphelweni ukuya esiphelweni: abasebenzisi, iimfuno, iinkcukacha, iiprojekthi zophuhliso (iskram esijolise), ii-SUTs, iimvavanyo, izicwangciso zovavanyo, iingxelo zovavanyo, kunye nemikhankaso yovavanyo.
Nceda uphawule apha ngezantsi kwiingcinga zakho / kumava akho kuso nasiphi na isixhobo esivulekileyo solawulo lwezixhobo ezidweliswe apha ngasentla kunye / okanye ukuba wazi naziphi na ezinye izixhobo ekufuneka zongeziwe.
Ngaba iverizon ibiza ngaphezulu nge5g
Uyenza njani imeko ye-iPhone yesiqhelo
Imephu yenethiwekhi ye-T-Mobile 5G: zeziphi izixeko ezigutyungelweyo?
Isamsung kunye neapos; isiphelo seGalaxy Tab S6 iyathengiswa kwisaphulelo serekhodi ukuya kuthi ga kwi-200
Uyisebenzisa kanjani i-PlayStation 3 Sixaxis isilawuli ngefowuni yakho ye-Android okanye ithebhulethi